အမြန်အဖြေ- ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း။
သမ္မာကျမ်းစာ၏ ဓမ္မဟောင်းစာအုပ်များကား အဘယ်နည်း။ ၎င်းကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ ပထမငါးစောင်ဖြစ်သော ကမ္ဘာဦးကျမ်း: မူရင်းကျမ်း။ ထွက်မြောက်ရာကျမ်း-...
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ သမ္မာကျမ်းစာသည် စာအုပ်အဖြစ် “ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်” ဖြစ်သောကြောင့် ဘဝသည် ယခင်က “ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်” ဖြစ်သည်။ ငါတို့သူတို့…
အကောင်းဆုံးအဖြေ- မုသားအကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာက ဘာပြောသလဲ။
ဘုရားသခင်ကို လိမ်ညာခြင်းကား အဘယ်နည်း။ ထို့ကြောင့် မုသာစကားသည် အမှန်တရားနှင့် ဘုရားသခင်ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အလင်းပေးလိုခြင်း သို့မဟုတ် လက်မခံလိုခြင်း၌ ပါဝင်သည်။ ရှေးဟောင်း…
အကောင်းဆုံးအဖြေ- သမ္မာကျမ်းစာအရ လှည့်စားခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် လှည့်စားခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ၁ ယောဟန် ၂:၂၁ တွင် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား မုသာစကားမှ အမှန်အတိုင်းမသွားနိုင်ပါ။ အရ…
သမ္မာကျမ်းစာတွင် လုံ့လဝီရိယဟူသည် အဘယ်နည်း။
လုံ့လဝီရိယရှိသူကား အဘယ်နည်း။ ဂရုတစိုက်၊ အတိအကျနှင့်တက်ကြွ။ 2. adj ။ မြန်မြန်လုပ်၊ မြန်မြန်လုပ်။ ဝီရိယရှိရှိရှာခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။
သမ္မာကျမ်းစာက ဘာပြောသလဲ။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ယုံကြည်ခြင်းအသိုင်းအဝိုင်း၏ဘ၀တွင်သာ ဖတ်ရှုနိုင်သော စာအုပ်တစ်အုပ်လည်းဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာမှာ ဆီးရီးယားဆိုတာ ဘာလဲ။
သမ္မာကျမ်းစာမှာ ဆီးရီးယားဆိုတဲ့စကားလုံးက ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။ Syrian ဟူသော စကားလုံးသည် ဆီးရီးယားတွင် နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ဆီးရီးယားဘာသာစကားကို ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည် ဂရိ Συρία (ဆီးရီးယား) မှ ဆင်းသက်လာကာ Assyria မှဆင်းသက်လာသည်...
သမ္မာကျမ်းစာမှာပထမ ဦး ဆုံးအသီးတွေကိုဘယ်မှာပြောသလဲ။
သဲ့ကဘာလဲ။ 1. sf ပထမရလဒ် သို့မဟုတ် အရာတစ်ခု၏ ထုတ်ကုန်။ 2. သတင်းသမားတစ်ဦးသည် ဖြစ်ရပ်မှန် သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးရရှိသောသတင်းတွင်...
အကောင်းဆုံးအဖြေ– သမ္မာကျမ်းစာထဲက မိရိအံဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။
မိရိအံ၏အပြစ်ကား အဘယ်နည်း။ ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​သည် မိ​ရိ​ယား​အား နူ​နာ​ဖြင့်​ဒဏ်​ခတ်​တော်​မူ​၏။ မောရှေ၏ညီမ မိရိအံ ဘာဖြစ်သွားသနည်း။ ဒီအချိန်ကစပြီး Maria ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်...
သင့်မေးခွန်း- သမ္မာကျမ်းစာတွင် Ainhoa ​​သည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် Ainhoa ​​ဟူသောအမည်ကား အဘယ်နည်း။ Ainhoa ​​​​၏အဓိပ္ပာယ်မှာ "ရွေးချယ်ခံရသူ" Ainhoa ​​​​၏အဓိပ္ပာယ်မှာအပျိုမှဆင်းသက်သည် (Aránzazu ၏အပျိုစင်...
12... 7,391 နောက်တစ်ခု
ဟိုင်း! ကျွန်တော့်နာမည် Alberto ပါ။ ငါ့ဘလော့ဂ်မှာကက်သလစ်အယူဝါဒ၊ ယုံကြည်ချက်အယူဝါဒများနှင့်ဝတ်ပြုဆုတောင်းခြင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားစရာဆောင်းပါးများကိုငါဝေမျှသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် ဆုတောင်းခြင်းဟူသော စကားလုံးသည် အကြိမ်မည်မျှပေါ်လာသနည်း။
True Religion ဂျင်းဘောင်းဘီက ဘာကြောင့် ဈေးကြီးတာလဲ။
မင်းရဲ့မေးခွန်း- ငါတို့ကို အပျိုစင်မာရီကို ဘယ်သူက ပေးခဲ့တာလဲ။
အမေးများသောမေးခွန်း- မြေကြီးပေါ်ရှိ ယေရှု၏အံ့ဖွယ်အမှုများကား အဘယ်နည်း။
© ၂၀၂၁ Synod
လက်ျာပိုင်ရှင်များသတိထားပါ။ အချက်အလက်များနှင့်ပညာရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပစ္စည်းအားလုံးကို site ပေါ်တွင်တင်းကြပ်စွာတင်ထားသည်။ သင်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်သည့်မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုတင်ခြင်းကိုသင်ယုံကြည်ပါကဆက်သွယ်ရန်ပုံစံမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသေချာဆက်သွယ်ပါ၊ သင်၏ပစ္စည်းကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။